My Friend or My Father | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » My Friend or My Father
My Friend or My Father
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Dec 26, 2013 in Creative Writing | 26 comments
Everywhere are my friends. I havealot of friends. Among of them Mg Mg is my best friend. I love him so much and he also loves me too much. My mother also loves him. He is my neighbor. ************* ************ ************ ********* ********** *********** ************* ************************** *********** ********** ************* ****************** ************ ******** *************
ဒါကတော့ အလယ်တန်းကျောင်းသားလေးတစ်ယောက် စာအော်ကျက်နေတာပါ။ ဒီတခါစာမေးပွဲမှာ အပိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ My best friend essay လေးပါ။ သူနဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း တွေဒီစာလေးကိုကျက်နေကြတာပေါ့။ မနက်ဖြန်တော့အပိုင်ပဲပေါ့။
အဲလိုနဲ့မနက်ကျောင်းသွား နှုတ်ကလဲတတွတ်တွတ်ပေါ့။ အဲလိုနဲ့စာမေးပွဲခန်းထဲဝင်၊ မေးခွန်းလဲရရော ကြည့်လိုက်တော့ Essay က My father တဲ့။ :harr: ဟုတ်ကဲ့ ကလေးတွေ ပြာသွားတာပေါ့။ ကျက်လာတာက My best friend ပါလာတာက My father။ အဲဒါနဲ့ နောက်ခုံကသူငယ်ချင်းကိုလှမ်းမေးတယ်။ ဟေ့ကောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့။ အဲဒါနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ မင်းကွာဘာခက်လဲ My friend နေရာမှာ My father ပြင်ရေးလိုက်ပေါ့တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ သူကလဲအေးဟုတ် တယ်ကွဆိုပြီး My friend နေရာမှာ My father ဆိုပြီးပြင်ရေးလိုက်တာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ ပိတ်သတ်ကြီးပြင်ကြည့်ပါအုံး။ :hint:
Everywhere are my fathers. I havealot of fathers. Among of them Mg Mg is my best father. I love him so much and he also loves me too much. My mother also loves him. He is my neighbor. ************* ************ ************ ******************* *********** ************* ************************** ********************* ************* ****************** ******************** *************
အောင်မယ်လေး ရီရလိုက်တာ အူကိုနာရော။
အဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ပျင်းနေလို့ရီရအောင်လို့ ဟဲဟဲ
ဘဲရီး ခရီရေးတစ် မိုင်းဆက်
အဟိ ခွိခွိ ခွိ
ရှာရှာဖွေဖွေ ရီရအောင် ရေးပေးတဲ့ တီသဲ
နာပြောတားပဲ ပေါက်ကရတွေတင်မှာလို့ ငိငိငိ
မာမီက ရမ်းရမ်းကို စွံတာပဲနော်…
တော်လိုက်တာ… အမေကို ယောက်ျားပေးစားချက်များ…
အိုးဘိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ Essay တပုဒ်ပီးဖို့လိုရင်းပဲလေ ငှဲငှဲငှဲ :mrgeen:
အင်ဟင့်…. တားတားရဲ့ မာမီတော့ တွားရှာဘီ…
လှည်းသားငါးရာကမှတော်သေးတယ်… ဟီ ဟိ
အာဟိအာဟိ တော်ပလား လှည်းသားငါးရာ
ဖရန့်နဲ့ ဖားသား ပြောင်းလိုက်တော့
ပြတ်ကရောဘဲ … ခွိခွိ
တားဒေါ်မောင်လည်း ဂလို လုပ်နေအုံးမယ်နော် .. ဟီဟိ
ရဒယ်ဖြစ်စေရဘူး။ သူ့ကိုကျက်ကိုမကျက်ခိုင်းတော့ဘူး ဟဲဟဲ ကွ့ကိုယ်ကျိဖြေလို့ ငိငိငိ
နောင်တစ်ခေတ်မှာ ထူးချွန်မယ့် ကလေး….
အဆင်ပြေသလို စီစဉ်တတ်တယ် :mrgreenn:
My father name is Ma Nu Aye. he is my friend.